Burma Partnership » Media Advisory: Press Briefing – Launch of 2014 Report on the Performance of Myanmar National Human Rights Commission
By Burma Partnership , Equality Myanmar • September 23, 2014
The 2014 report on the performance of Myanmar National Human Rights Commission (MNHRC), co-authored by Burma Partnership and Equality Myanmar, will be launched at Myanmar Journalist Network office on Thursday, 25 September 2014. The report contributed to and was published in the 2014 ANNI Report on Performance and Establishment of National Human Rights Institutions in Asia which was recently released in Dubai and covers the developments that took place over the course of 2013 and significant events in the first quarter of 2014.
Burma Partnership and Equality Myanmar have been monitoring the activities and performance of the Myanmar National Human Rights Commission since its establishment on5September 2011 through Notification (No.34/2011) issued by the Government of the Republic of the Union of Myanmar. They also previously published briefing papers, recommendations on the Enabling Law and 2013 annual report on the performance of the MNHRC.
The organizations will be holdingajoint press conference to discuss their performance and effectiveness of the MNHRC with input from Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) on trends of developments of National Human Rights Institutions fromaregional perspective.
What: Press Briefing for Launch of 2014 Report on Performance of Myanmar National Human Rights Commission
Where: Myanmar Journalist Network, No. 181, 2nd Floor (B), 36 Street, Kyauktada Township, Yangon
When: 10:30 am, Thursday 25th September 2014
Speakers: Khin Ohmar (Coordinator, Burma Partnership), Aung Myo Min (Executive Director, Equality Myanmar), Joses Kuan East Asia program Associate / ANNI Focal Point, Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
For more information please contact Joseph Wah +95 (0) 9250821194
၂၃ ရက် စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၄
အကြောင်းအရာ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆန်းစစ်သုံးသပ် ထားသည့် အစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲအစီအစဉ်သို့ တက်ရောက်ရန် ဖိတ်ကြားခြင်း
မြန်မာ့အရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သူများအဖွဲ့ (Burma Partnership) နှင့် ညီမျှခြင်းမြန်မာ (Equality Myanmar) တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း စက်တင်ဘာလ (၅) ရက်၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် တွင် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာ (အမှတ်၊ ၃၄/ ၂၀၁၁) ထုတ်ပြန်ချိန်မှစ၍ ကော်မရှင်၏ လှုပ်ရှားမှုများနှင့် လုပ်ငန်း အကောင်အထည် ဖော်မှုများကို စောင့်ကြည့် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြ သည်။ ထိုသို့ စောင့်ကြည့်နေစဉ် ကာလအတွင်း သုံးသပ်ချက် စာတမ်းများနှင့် အစီရင်ခံစာများကိုလည်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ယခု ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့အရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သူများအဖွဲ့နှင့် ညီမျှခြင်းမြန်မာတို့မှ ပူးပေါင်း ထုတ်ပြန်ထားသော အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ လုပ်နိုင်စွမ်းရည်ကို မှတ်တမ်း တင်ထားသည့် သုံးသပ်ထားသည် ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် အစီရင်ခံစာကို မိတ်ဆက်ရန်အတွက် အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတစ်ရပ် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ရာ သတင်းမီဒီယာ မိတ်ဆွေများမှ တက်ရောက်ကြပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ် ပါသည်။
ဤအစီရင်ခံစာကို အာရှပစိဖိတ်ဒေသ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး အဆောက်အအုံများဆိုင်ရာ NGO ကွန်ယက် (ANNI) မှ ပူးပေါင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အာရှဒေသတွင်းရှိ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး အဆောက်အအုံများ၏ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည် ၂၀၁၄ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာ၏ မြန်မာနိုင်ငံကဏ္ဍ အစီရင်ခံချက် အနေဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
နေ့ရက် – ၂၅ ရက် စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၄
အချိန် – နံနက် ၁၀း၃၀ မှ မွန်းလွဲ ၁၂း၃၀ ထိ
နေရာ – မြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွက်ယက်ရုံး (အမှတ် ၁၈၁၊ ဒုတိယထပ် (B)၊ ၃၆ လမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့)
ပါဝင်ဆွေးနွေးမည့်သူများ – ဒေါ်ခင်ဥမ္မာ၊ (တာဝန်ခံ၊ မြန်မာ့ အရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သူများအဖွဲ့)၊ ဦးအောင်မျိုးမင်း (အထွေထွေ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ညီမျှခြင်း-မြန်မာ)၊ မစ္စတာဂျိုးစက်ခူဝန် East Asia Programme Associate / ANNI Focal Point, Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
ဆက်သွယ်ရန် – ကိုဂျိုးဇက် +၉၅ (၀) ၉၂၅၀၈၂၁၁၉၄
Tags: Burma Partnership, Equality Myanmar